You are here: Home HOLY YEAR OF DIVINE MERCY Prayers for the Holy Year Umthandazo wokuzilungiselela i retreat yebandla
Oh Nkosi, senze ukuba siguqulelwe ngokupheleleyo kwinceba yakho uze usenze sibe ngumfuziselo ophilayo wakho.
Oh Nkosi, yanga inceba yakho engenasiphelo nengenakuqiqwa lula ingangena ezintliziyweni nasemizimbeni yethu sikwazi ukuyikhuphela nakwabanye.
Yenza ukuba amehlo ethu abe nenceba ukuze singaze simcingele kakubi omnye, singamgwebi ngenxa yembonakalo yakhe, kodwa sibone okuhle kuphela kumphefumlo wommelwane ukuze sibe luncedo kuye.
Sincede Nkosi ukuze iindlebe zethu zibe nenceba, sincedise ukuze iindlebe zethu zingabi kude ekumameleni iintsizi nezikhalo zabammelwane noodade bethu.
Sincede Nkosi ukuze ulwimi lwethu lube nenceba, ukuze singaze sithethe gwenxa ngabazalwane noodade bethu.Yanga ulwimi lwethu lungenza ukuba bafumane ilizwi lethemba, elentuthuzelo neloxolelwaniso.
Sincede Nkosi ukuze izandla zethu zibe nenceba, mazibe zizixhobo ezizaliswe zizenzo ezilungileyo zodwa ukuze ndibe nokwenza okuhle kummelwane wam kwaye ndiluthathele kum uxanduva lokwenza imisebenzi enobunzima yakhe.
Sincede Nkosi ukuze iinyawo zethu zibe nenceba ukuze sisoloko sikhawuleza ukuya kunceda abammelwane bethu kwiinzima neentlungu ezibaveleleyo. Yenza ukuba sikubekele ecaleni ukudinwa nokoyisakala kwethu koko somelele sibe luncedo kwabanye.
Sincede Nkosi ukuze iintliziyo zethu zivuleke zibe nenceba, ukuze sibe nozwelo nosizi ngeentswelo zabanye abantu. Masingaze singavumi okanye sale Nkosi ukunikeza isandla soncedo nakubanina side silunike uncedo nabo baza kudlala ngobuntu bethu esibenzele bona.
Yesu onenceba, sicela usiguqule sifane nawe ngenceba kuba wena uyakwazi ukukwenza konke oko. Amen
Sista Faustina ongcwele..... sithandazele
Yohane Pawulosi wesibini ongcwele ......sithandazele